ညန်​မာ့ ရုပ်​ရှင်​ ​ကျေးဇူးရှင်​ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Aha! Jokes, Satire » ညန်​မာ့ ရုပ်​ရှင်​ ​ကျေးဇူးရှင်​	16
ညန်​မာ့ ရုပ်​ရှင်​ ​ကျေးဇူးရှင်​
Posted by ムラカミ on Apr 19, 2015 in Aha! Jokes, Satire, Entertainment, Members, My Dear Diary | 16 comments
အိမ်​​ရှေ့ လမ်းရဲ့ဟိုဘက်​ခြမ်း ကန်​ထရိုက်​တိုက်​မှာ ဖျာသယ်​မ​လေး​တေ​နေတယ်​
သူရို့အခန်းမျှာ အထိန်း​တော်​ နဲ့ချာတိတ်​ငချွတ်​​တွေလည်းရှိတယ်​
ည ဆယ့်​တစ်​ ဆယ့်​နှစ်​ဆို တက္ကစီနဲ့ အလျှို လျှို ​အော်​ဒါလိုက်​ကြတယ်​
၀ရံတာထွက်​တဲ့ သံပန်း နဲ့မီး ပိတ်​​လေ့မရှိ
မနက်​ သုံး​လေးနာရီ ပြန်​လာ​လေ့ရှိတယ်​
​မွေးထားတဲ့ ​ခွေးပု​လေး​တွေက သူတို့မရှိတဲ့အချိန်​ဆို ၀ရံတာထွက်​​ဟောင်​​လေ့ရှိတယ်​
ဒင်းတို့ အသံ​ကြောင့်​ အိပ်​​ရေးပျက်​တဲ့ မိမိဂီ ၀ရံတာထွက်​ စိကရက်​​သောက်​ရင်း ဒါ​တွေသိလာရတယ်​
တ​နေ့က ဖားသား အိမ်​မှာအလှူရှိလို့ နယ်​က​နေခနလာတယ်​
ကား​ရွေ့ရင်း ​ခွေး​တွေမြင်​​တော့ ကျုပ်​တို့ဘက်​ကိူ လှည့်​ကြိမ်းတယ်​
မင်းတို့​ကောင်​​တွေ ရယက မတိုင်​ကြဘူးလား​ပေါ့
မှတ်​မှတ်​ရရ ည ဆယ့်​နှစ်​နာရီ​လောက်​ကြီး
မအိပ်​​သေးတဲ့ ကျန်​ကိုယ်​​တော်​ တခွန်းဝင်​​ပြောတယ်​
သည်​အချိန်​ ရယက က အကုန်​ ​ကေတီဗီ ​ရောက်​​နေပြီ တဲ့
ဘိုး​တော်​က​တော့ ငို၍ရီ၍မရ​သော မျက်​နှာနဲ့
နင်​ပြီးသကာလ APK ​အေးပါကွာ ​လို့​ဖြေတယ်​
အနည်းဆုံး​တော့ ကျုပ်​တို့ အဆူအပူခံရတာ လွတ်​သွားတယ်​
ဒီ​ကောင်​ ဒီ​တော်​ကီကို ဘယ်​ကရသလဲ​ပေါ့
ဖြစ်​ချင်​​တော့ ငတိက တီဗီကြည့်​​နေတယ်​
သူကြိုက်​တဲ့ ကာတွန်းကား​တွေ မလာတဲ့အချိန်​
မိမိဂီ ​ခေါင်းထဲတချက်​ လက်​ကနဲဖြစ်​သွားတယ်​
က​လေး​တွေက ဗမာကားကြိုက်​တတ်​ကြတယ်​ ကာတွန်းကားပြီးရင်​​ပေါ့
ဟာသကား​တွေမယ်​ မိန်းမမသိ​အောင်​ ခိုးပီး​ပွေးတာတို့
လူကြီးလူ​ကောင်းဟန်​​ဆောင်​ပီး မဟုတ်​တာလုပ်​တာတို့ ဆိုရင်​ ​ဗန့်​​ခေါ်မလား ဂျိတ်​လုံး​ခေါ်မလား
​ကေတီဗီ သွားတယ်​ မာဆတ်​သွားတယ်​ ဆိုပီး​ဒေါက်​ဖြုတ်​တဲ့ ဟာသကို လှိုင်​လှိုင်​ကြီး သုံးတာရယ်​
ဖျာသယ်​မ​မွေးထားတဲ့​ခွေးအသံ​ကြောင့်​ အိပ်​မရတဲ့ညမှာ ဖားသားအဆူအ​ပြော​အောက်​က ကျန်​ကိုယ်​​တော်​ကယ်​တင်​​ပေးခဲ့တဲ့ ကိစ္စရပ်​မှာ
ညန်​မာ့ ညန်​မာ့ရုပ်​ရှင်​ရဲ့ ​ကျေးဇူး​တွေ တပုံတပင်​ပါလားရယ်​လို့​ပေါ့
ဦးကျောက်ခဲ says: ဟမ် … ကျန်ကိုယ်တော် မကောင်းတာတွေ အတုမြင်အတတ်သင်ကုန်ပါ့မယ်…
ဟီ ဟိ… ခီများရော … ဖျာသွားမဝယ်ဘူးလား… အား ဟိ
ခင်ဇော် says: သင်ဖြူးလား ပလပ်စတစ်လားး
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ဒင်းတို့အ​ပေါ်ထပ်​က ​ခြေသလုံးလှဒဲ့ ကချင်​မ​လေး​တေအ​ကြောင်း ကြုံမှဆက်​​ရေးပါ့မယ်​ဗျာ
Mr. MarGa says: အင်း….
ဘယ်​ကဘယ်​လို အ​ပေါ်​ထပ်​ကိုရောက်​သွားပြန်​တာတုန်း Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3714
လုံမလေးမွန်မွန် says: ဟိ…. ကျန်ကိုယ်တော် မှတ်ဥာဏ်ကောင်းချက်… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12176
Alinn Z says: ဖျာသယ်မလေးကို မေးပေးပါ ဖျာအသစ်ကလေးတွေ ရောက်တတ်လား
ဘယ်ဆိုဒ်က ဘယ်ဈေး စသည်ဖျင့်. . .
kai says: လေဒီခိုင်လွန်ခဲ့တဲ့.. ၉နှစ်လောက်ကရေးဖူးတဲ့.. သင်္ကြန်သက်တံ့ဆိုတဲ့..၀တ္တုတိုထဲမှာတော့… ၁၀တန်းမအောင်တဲ့… ဖျာသယ်မလေးတလ၀င်ငွေဟာ.. ဆရာဝန်မလေးတလ၀င်ငွေထက်သာနေသမို့.. မြန်မာပြည် အဆင်မြင့်ပညာရေးကို.. မေးခွန်းထုတ်ထားသဗျ..။
အခုရော.. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8014
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: လွန်​ခဲ့တဲ့ ၉နှစ်​ဆို​တော့ ၂၀၀၅ ၂၀၀၆​လောက်​​ပေါ့
ဟုတ်​ကဲ့ gsm sim card သိန်း၂၀​ကျော်​​သေးတဲ့ကာလခည
စင်​တင်​ရှိတဲ့ စား​သောက်​ဆိုင်​​တွေရဲ့ စူပါတန်းဝင်​သူက​လေး​တွေရဲ့တလ၀င်​​ငွေမို့ သူရို့ တ​ယောက်​တလုံး​ပေါ​ပေါသုံးနိုင်​ခဲ့ကြ​ကြောင်း မှတ်​သားဖူးခဲ့သလိုလိုရယ်​ပါ
Ma Ma says: ကျန်ကိုယ်တော်လေးသိတာ ဘာဆန်းလဲ။
သူ့အဖေ သွားနေကျမို့ နေမှာပေ့ါ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 3663
naywoon ni says: ငင်​ ဘိုဖြစ်​တာရဲ မ​နေ့က ဒီပို့စ်​မ​တွေ့ဘာဘူး ။ ညက်​ဆိလယ်​​အောင်​ရုတ်​နဲ့ မိမိဂီ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8068
မြစပဲရိုး says: မင်း ပါပါး ကြီး လဲ ကလေး ပြောလိုက် တဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကို အသေအချာ နားလည်မယ် မထင်ပါဘူး ဟယ်။
အချစ်တော် လေး က ပြောလိုက်တာမို့ ငြိမ်သွားတာ နေမှာ။
မယုံရင် ဇာတ်လမ်း ကို ပြန်ရစ် ပြီး ကျန်ကိုယ်တော်လေး ပြောတာ ကို မင်း ပြောကြည့်ပါလား။
ဖနောက် နဲ့ ပေါက် ခံရ/ မရ။ . လောင်းမား။
kotun winlatt says: ခြေသလုံးလှတဲ့ ကချင်မလေးတွေအကြောင်းးး ရေးအုန်းးမဒဲ့ ဖတ်ရချည်သေးးရဲ့ ဟေဟေးးး
black chaw says: ပြောရင် ယုံမှာမဟုတ်ဘူး။
အစက နေ အဆုံးအထိ ဖတ်မိသွားပါတယ်။
သုမောင် ရေးသလို မျိုးလို့တင် စားရင်
မြောက်နေမှာစိုးလို့မ ပြောတော့ပါဘူးရယ်။
ကျန်ကိုယ်တော်လေး ရဲ့စကားလေးတစ်ခွန်းကို
ဘာမှမယ်မယ် ရရ မပါပဲ
မယ်မယ် ရရ ဖြစ်သွားတယ်လို့ 
အောင် မိုးသူ says: ညန်မာ့ညန်မာ့ရုပ်ရှင် လူမျိုး ဂုဏ်အင် သုခုမတွင် ပေါ်လွင်ခဲ့ပေး))
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ညန်​မာ့ ညန်​မာ့ရုပ်​ရှင်​
Mike says: .ဖျာသယ်လေးတွေနဲ့နီးတော့ ဖျာလိုချင်အဆင်ပြေသပေါ့ ကိုယ်တော်…
.ကလေးတွေတတ်ပုံများတော့…တစ်ရက်က နယ်ကသူငယ်ချင်းသားအဖကို တလိတ်ဆန်ရုံလိုက်ပို့သဗျ
.သူ့သားက နှစ်တန်းပဲရှိသေး…ရုံအနှံ့ ပါတ်ပြီး ခဏနားတော့ ကိုယ်တော်လေးကလွှတ်ကနည်းညည်းတယ်
“အဘရာ..ဒီလိုသာလျှောက်နေရရင် ညနေ မာဆတ် သွားရမဲ့ပုံပေါ်တယ်” တဲ့…ကျုပ်ဆိုရီလိုက်ရတာ
.သူ့အဖေတောင်အံ့တွေသြလို့…မေးကြည့်တော့..သားတော်မောင်က လူရွှင်တော်တွေပျက်တာလေ .အဘရာတဲ့…ကောင်းရော Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.